देव भण्डारीको कथाशिल्प | नवीन पौड्याल
देव भण्डारीको कथाशिल्प
कृति/समीक्षा नवीन पौड्याल January 9, 2022, 6:47 am
१. आमुख -
देव भण्डारी एक उपन्यासकार, कथाकार र कवि हुन्। उपन्यासको तुलनामा कथा सिर्जनामा उनी बढी चर्चित र सफल देखिन्छन्। उनी सत्तर र अस्सी दशक र एकैचोटि २००६ देखि यता उनका पुस्तक प्रकाशित भएका छन्। उनका पुस्तकको प्रकाशन वर्ष र तिनका अवधि हेर्दा उनका लेखनका पूर्वाद्ध र उत्तरार्द्ध गरी दुई चरण छन्। उनको पूर्वार्द्ध चरणमा उपन्यास लेखनमा रमेका छन् भने उत्तरार्ध चरणमा भने कथा लेखनमा सक्रिय देखिन्छन्। उनको कविता अध्ययन गर्दा सरलता, समयको यथार्थतालाई कलात्मक अभिव्यक्ति आदि दिइएको पाइन्छ। यद्यपि यस आलेखको उद्देश्य उनको कथाकारितामाथि प्रकाश पार्नु रहेको छ।
२. कथाकार देव भण्डारीका कथामा कथागत प्रवृति-
२.१. प्रेमका विभिन्न स्वरूपको चित्रण- देव भण्डारीका धेरै कथाहरूमा प्रेमका विभिन्न अवस्थाको चित्रण पाइन्छ। युवासुलभ प्रेम, त्यसका मिलन र विछोड, मानसिक उत्तेजना, विक्षोभ, विषाद, छट्पटि, असन्तुष्टिहरूलाई कथागत कच्चा पदार्थ बनाउने गर्छन्। कतै गरीबीका कारण, कतै बेरोजगारी र कतै जात धर्म आदिका कारणले प्रेम असफल भएर दुवैले जीवनभरि छट्पटिमा बिताउनु परेको स्थिति देखिन्छ। पहिले आफ्नो यौवनकालको असफल प्रेमलाई पछि बुढेसकालमा पनि पश्चाताप गरेको पनि पाइन्छ। पहिलेको प्रेम कुनै सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक व्यस्तता आदि कारणले विफल भएको पनि देख्न पाइन्छ। पति पत्नीका बीच विश्वास, समझदारीको कमी र विभिन्न कारणले पनि विफल भएको देखाइएको पाइन्छ। जयन्त र नीलिमा पनि विशेष परिस्थितिका कारण एक दिन छुट्टिन पर्दा विरहले सताइएका छन्। दुवै पश्चाताप गर्छन्। ढुङ्गामा लेखिएका अक्षर कथाको बुढा मानिसको प्रेम अटल छ। युवावस्थामा प्रेमी भेट्ने स्थानको ढुङ्गामा लेखिएको नाम नै प्रेमको अटल, अचल र शाश्वत रूपमा हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश पाइन्छ।
२.२. निम्न र निम्नमध्यम आर्थिक अवस्थाको चित्रण¬ - भण्डारीका प्रायः कथामा निम्न र निम्न मध्यम आर्थिक अवस्थामा रहेका जनजीवनका विभिन्न अभाव, अपुग अतृप्ति र अप्राप्तिमा रहेका हुन्छन्। पात्रहरू थोरै तनखा पाउने वा ज्यामी श्रमिकहरू रहेका छन्, जो विभिन्न मानसिक दवावमा पर्न गर्छन् गर्छन्। धेरै पात्रहरू शिक्षित बेरोजगार छन्। बेरोजगारी समस्याले पात्रहरू मानसिक पीडाग्रस्त, विक्षोभमा बाँच्नुपरेको सत्यता पाइन्छ। केही कथामा खान लाउन नपाएको, औषधी खान नपाएको, राम्रो कपडा फेर्न नपाएको आदि स्थिति देखिएको छ। गाउँका अधिकांश मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर देखाइएको छ। खेतीपाती र अन्य काम गरेर जीवनलाई सुरोबुरो धान्ने गरेको यथार्थलाई केही कथामा देखाइएको छ। दाइँ कथामा पाखुरेले जति दुःख गरे पनि अर्काको निम्ति मात्र फलिफाप हुन्छ भन्ने यथार्थ देखाइएको छ। छहारी कथाकी मनरानी पनि आफ्नो लोग्नेले छोडेर गएपछि बालक छोरालाई लिएर अनकन्टार ठाउँमा जाँड़ रक्सी बेचेर पेटपालो गरेर बस्नु पर्ने बाध्यता र दोस्रो विवाह गर्नु परेको वास्तविकतालाई देखाइएको छ।
२.३. घटना र त्यसको पृष्ठभूमिको चित्रण - कुनै कुनै कथाकारले आफ्ना कथामा पृष्ठभूमि तयार पार्ने घटनाको पृष्ठभूमि तयार पारेका हुन्छन्। भण्डारीका कथामा विशेषगरी प्रेमको प्रसङ्गमा पृष्ठभूमि निर्माण गरिएको पाइन्छ। भूपालमानसिंह राणाको विगतको चोखो प्रेम र प्रेमिका अप्राप्तिको खिन्नता, किरणले सोल्टिनी मन पराएर पनि बिहा गर्न नपाएको खिन्नता छ।
२.४. कारूणिक भावपरिमण्डल - उनका अधिकांश कथाका पात्रको करूणामय मानसिक अवस्था देखाइएका पाइन्छ। पात्रहरू कुनै न कुनै समस्या ग्रसित छन्, पीडा, औडाहा, कि मानसिक दुःख, कि आर्थिकजन्य दुःखबाट पीडित छन्। कुनै प्रेमपीडाले, कुनै आर्थिक अभावले भित्रभित्र रून्छन्। प्रायः कोही पनि सुखी छैनन्। वर्तमानमा सुखी देखिए पनि विगतको घाउले दुखाएको हुन्छ।
२.५. सन्देशमूलकता – उनका प्रायः कथामा परोक्ष नैतिक सन्देश दिइएको हुन्छ। कतै जीवन अनुभवबाट प्राप्त भएको ज्ञानको अभिव्यक्ति, कतै नैतिक सन्देश, कतै जीवन सन्देस पाइन्छ। प्राय जम्मै कथा आशावादी छन्। जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ र त्यही सङ्घर्षपछि जे हासिल हुन्छ, त्यो नै जीवन हो भन्ने सन्देश पाइन्छ। सोचें जस्तो, देखे जस्तो जीवन होइन भन्ने अभिव्यक्त गरिएको छ। बूढो उदास रुख कथामा मेघा नामकी कलकत्ताकी प्रोफेसर कालिम्पोङको रेसेप बजार गएर त्यहोँ गएर बूढो चौकीदारको वास्तविकता र त्यहाँको बुढो रूखको स्थितिबाट जीवनको दार्शनिक चिन्तनमा जीवनको सन्देश
२.६. ग्राम्य परिवेशको चित्रण- उनका अधिकांश कथाहरू ग्राम्य परिवेशमा सिर्जित छन्। गाउँमा चल्ने गरेको खेतालापात, खेतीपातीको समय, धान मकै कोदो आदि काम गरेको उल्लेख आदि पाइन्छन्। दाइँ गरेको, रोपाइँ गरेको, अदुवा रोपेको लगायत गाउँमा सम्पन्न हुने सबै कुरालाई देखाइएको छ। गाउँले जीवनका सबै पक्षहरलाई देखाइएको पाइन्छ। तीर्थ ब्रत गर्नुइएको पाइन्छ। उनका अधिकाङ्श कथाको परिवेश कालिम्पोङ र यसका वरिपरिका गाउँ र बस्तीको चित्रण गरिएको पाइन्छ। कालिम्पोङ शहर, यहाँका गाउँ, रेली र टिस्टा नदीको वर्णन पाइन्छ। यहाँको जनजीवनलाई कथामा बडो कुशलतासँग बुनेका छन्।
३. भण्डारीका कथाको तथ्य र कथ्यान्वेषण-
४. भण्डारीका कथाका जीवन्त पात्र-पात्रा-
देव भण्डारीका कथाका पात्र विभिन्न प्रकारका छन्। समाजभित्रकै कुनै वास्तविक र सामान्य व्यक्तिहरूलाई पात्र बनाएका छन्। सबै पात्र सजीव लाग्छन्। उनले आफ्ना पात्रहरू आफ्नै वरिपरिका गाउँ घरका विभिन्न किसिमका चरित्राङ्कन गरेका छन्। गाउँ-घरकै मानिसहरूलाई काल्पनिक नाम र चरित्र दिई पात्र-पात्रा बनाएर तर कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका कथाका पात्रहरूको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। तीन चार पात्रहरूलाई नै चरित्र प्रदान गरेका हुन्छन्। उनका कथाका पात्र शिक्षक, गाउँले कामको खेताला, पल्टने, विद्यार्थी, साधारण सरकारी कर्मचारी र सरकारी, सैन्य अधिकारी, सरकारी अधिकारी, साधारण गृहिणी, काठमिस्त्री, पसले, आदि रहेका छन्। कथाका पात्र-पात्राका नाम काल्पनिक भए पनि अधिकाङ्श भने वास्तविक हुन् हुन्छन्। हामीबीचकै पात्र-पात्रालाई कथाको विषय बनाएका छन्।
५. भण्डारीका कथाको संरचना-
भण्डारीका तीन कथासङ्ग्रहहरूमा जम्मा सैंतालिसवटा कथाहरू सङ्गृहीत छन्। प्रत्येक कथा बुनोट, वस्तु चयन प्रस्तुतिकरण र संरचनाका आधारमा उत्कृष्ट रहेछन्। अज्ञात दिशातिर कथासङ्ग्रहका कथाहरूका एक झलक अध्ययन गर्दा हामी यी निम्ति इकाईका आधारबाट हेर्न सक्छौं। अज्ञात दिशातिर कथासङ्ग्रहमा जम्मा सत्रवटा, बक्ररेखाहरू कथासङ्ग्रहमा जम्मा एघारवटा कथाहरू र धरोहर कथासङ्ग्रहमा जम्मा उन्नाइसवटा कथाहरू रहेका छन्। कथाका छ विस्तार प्रायः सात आठ पृष्ठका र पढ्न थाल्दा प्राय आधा घण्टाभित्र पढिसकिन्छ। पढ्दै गर्दै विषयविस्तार र विषय सूत्रताले पाठकलाई आकर्षणले तानेर लाने सामर्थ्य पाइन्छ। भण्डारीका कथाका आयाम विस्तार गरिएको विश्लेषणात्मक किसिमको पाइन्छ। कुनै पनि विषयलाई सूक्ष्म रूपमा नै वर्णन गरिएको पाइन्छ। कतै पूर्वद्वीप्ति कतै विहङ्गावलोकन, कतै कथावस्तु फड्को हान्दै अघि बढेको र कतै विस्तृत वर्णन गर्दै कथा बुनेका हुन्छन्। उनका कथाहरूको संरचनालाई यस तालिका बनाएर एक झलकमा हेर्न सकिन्छ-
६. मानसिक र बाह्य परिवेश-
देव भण्डारीका जम्मै कथामा ग्रामीण परिवेश पाइन्छ। उनका अधिकाङ्श कथामा ग्राम्य परिवेशका विभिन्न पक्षहरू पाइन्छ। पाठकले उनका कथाभित्र पसेर गाउँ र गाउँले जीवन पाउँदछ। उनका प्रत्येक कथामा एउटा संसार हुन्छ, जहाँ विभिन्न दृश्य-परिदृश्य, जीवन र पात्रहरू रहेका हुन्छन्। पात्रहरू हामी जस्तै हाँस्छन्, रून्छन्, प्रेम गर्छन्, भूल गर्छन्। पात्र-पात्राका मनमा आनन्द, हर्ष, विषाद्, विक्षोभ सबै भाव तरङ्गित हुन्छन्। प्रत्येक कथाहरूका पात्रहरू मानसिक रूपमा पीडित छन्। कुनै कथाको तात्कालिक परिवेश शहरी भए तापनि मूल चैं ग्राम्य परिवेश नै रहेका छन्। यसमा कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किमका केही बजार र गाउँ, मुम्बई, बनारस आदितिरको परिदृश्य देखाइएको छ। यद्यपि कथाकारको उद्देश्य ग्राम्य जीवनको परिवेश देखाउनु रहेको छ। उनका केही कथामा प्रेमका विभिन्न रूपमा छन् कोही प्रेमले आनन्दित छन् र कोही पीडित छन्।
७. बाबा र माटो- नयाँ कथा सङ्ग्रह –
देव भण्डारीको नयाँ कथासङ्ग्रह बाबा र माटो हाम्रो सामु आएको छ। यो कथा पाठकका निम्ति आनन्दको कुरा हो। यसमा जम्मा .. वटा कथाहरू सङ्गृहीत छन्। यस सङ्ग्रहभित्र रहेका कथाहरूमा पनि हाम्रै वरिपरिका दृश्य, मानव समाजका विविध पक्षहरू, देखे सुनेकै घटनाहरूलाई कल्पनाको रङ्ग दिएर कलात्मक रूप दिएका छन्। हाम्रै छेउछाउका पात्र-पात्रालाई कथाको संसारका बासिन्दा तुल्याएका छन्।
८. मूल्याङ्कन र उपसंहार -
नेपाली कथा साहित्यमा देव भण्डारी एक विशिष्ट नाम हो। उनका हालसम्म जम्मा सैंतालिसवटा कथाहरू सङ्गृहीत छन्। यद्यपि उनका जम्मै कथामा विभिन्न विषयवस्तु, कथावस्तु, शिल्प, संरचना, बुनोट, बनोट आदि सबै तत्वहरूका कुशल संयोजन गरेका छन्। उनको कथा लेखन विश्लेषणात्मक र चरित्रप्रधान किसिमको पाइन्छ। थोरैमा धेरै, व्यष्टिमा समष्टि, व्यक्तिमा समाज रहेको हुन्छ। हाम्रो समाज वरिपरि घटना साना ठुला घटना र पात्र-पात्राका कथालाई उनले आफ्नो कथागत विषयवस्तु बनाएका छन्। उनका कथाहरू घटनाप्रधानभन्दा चरित्र प्रधान र विचारप्रधान रहेका छन्। कथा वा घटनाको एउटा सानो तन्तुलाई समातेर कलात्मक ढङ्गमा कथा बुन्नु उनको कथ्य कौशल पाइन्छ। उनका अधिकांश कथाहरूको विषयवस्तुको सूक्ष्म विश्लेषण, पात्र-पात्राको चयनमा वास्तविकता, यथार्थता पाइन्छ।